Fiainana mpilalao baolina kitra :: Mandray anjara amin’ny ady amin’ny coronavirus i Bapasy • AoRaha
Mety ho nanaitra an’ireo mpamaky ny gazety Ao Raha, nivoaka ny zoma 3 avrily 2020, ny lohateny teo amin’ny pejy voalohany momba an-dRazakanantenaina Pascal na i Bapasy, mpilalao baolina kitra mila ravinahitra atsy amin’ny Nosy La Réunion, sady mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy na Barea. Nisy ireo nihevitra fa voan’ ilay valanaretina coronavirus izy, teo am-pahitana an’ilay lohateny teo amin’ny pejy voalohany: “FIAINANA MPILALAO BAOLINA KITRA, Miady amin’ny tsimok’aretina Covid-19 koa i Bapasy”. Nazava tsara ny tian-kambara raha namaky an’ilay famintinana kely teo amin’ny pejy voalohany sy ny lahatsoratra feno tao amin’ny pejy fahatelo. Tena ao anatin’ny fahasalamana tokoa ny lehilahy, araka ny voarakitra ao anatin’ny lahatsoratra, izay nanaovana an’io lohateny io.
Marihina fa tsy milaza ho mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 mihitsy akory i Bapasy raha natao hoe miady amin’ny aretina coronavirus izy. Tahaka ny Filohan’ny Repoblika, izay milaza matetika rehefa miresaka amin’ny vahoaka, na eny ankalamanjana na amin’ ny haino aman-jery hoe miady amin’ny coronavirus isika, dia ady mba tsy hiparitahan’io valanaretina io sy ny tsy hifindrany amin’ny Malagasy marobe no iarahana manao, na iza na iza, ary na aiza na aiza.
Amin’ny maha mpilalao fanta-daza sy maha mpilalaon’ny ekipam-pirenena malagasy an’i Bapasy kosa no nanasongadinana azy amin’ny lohateny, mba ho mpampita hafatra mafonja amin’ny Malagasy rehetra manoloana an’izao ady atrehin’i Madagasikara amin’ ny valanaretina coronavirus izao. Heverina fa henoin’ny olona kokoa mantsy ny mpilalao baolina kitran’ ny Barea noho ny fahombiazana tamin’ireny CAN tamin’ny taon-dasa ireny, ka hararaotina tokoa satria ampiasaina izay fomba hampahatsiarovan-tena ny Malagasy amin’ny fanarahana an’izay toromarika sy fepetra apetraky ny fanjakana mba handresena ny coronavirus.
Na izany aza dia amin’ny anaran’ny gazety Ao Raha no itondranay fialan-tsiny amin’izay mety ho fanohintohinana nahazo an’i Bapasy noho iny lohateny iny. Tsy nisy mihitsy ny fikasana hanoso-potaka na hamoaka vaovao diso momba azy satria porofon’izany ny fitaterana an’io lahatsoratra miresaka ny fandraisany anjara amin’ny fanentanana ny mpiray tanindrazana amin’ ity ady amin’ny valanaretina eto amin’ny firenena ity, tahaka izay efa nataon’ ny gazety Ao Raha momba ireo mpilalao hafa mandrafitra ny Barea izay tsy mikely soroka amin’ny fanoroana hevitra ny Malagasy.
Fahasalamana mpanazatra :: Niditra hopitaly eny Soavinandriana i Raux Auguste
Haiady karate :: Takiana kara-pilalaovana avokoa ny klioba sy ny seksiona ary ny ligy